All the Muslims and Islamic organizations in Myanmar need to demand U Thein Sein to arrest U Wira Thu together with all his gang members and investigate the 969 movement | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« My Sandar Aye Clinic was there in Pe Poke Tan
ဦးဉာဏိဿရ ပြောတဲ့ ဧည့်သည် မြန်မာတို့ ဗဟိုမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ၀င်ရောက်နေထိုင်ခြင်း »
All the Muslims and Islamic organizations in Myanmar need to demand U Thein Sein to arrest U Wira Thu together with all his gang members and investigate the 969 movement
All the Muslims in Myanmar or around the world and all the Islamic organizations in Myanmar should speak out to demand U Thein Sein‘s government to immediately arrest U Wira Thu and the whole gang including his political patrons and financiers. They are likely to be U Khin Nyunt, U Aung Thaung and U Khin Shwe.
U Wira Thu had started the TERRORIST 969 Anti-Muslim Hate movement and this logo and movement must be declared illegal outlawed movement.
Myanmar goverment can’t control religious riots if they don’t stop the hate speech. This fake photo presented at U Wira Thu’s Monastery, Mandalay at 28-03-2013. Labelled shown Muslim extremist burn the christians alive at Nigeria..But original photo is from “Fuel tanker explosion kills over 230 in Congo” at 3rd July 2010. (Here is original link, http://www.afrik.com/article20308.html.)
My friends in Mandalay confirm like this, “မစိုးရိမ်တိုက်သစ်-
It is cleared that he used the pic of burnt bodies infront of his office to motive and incite his followers to burn the Muslims in Meikhtila.
My brother Nay Aung Kyaw wrote>>> After acting asaprime mover in killing of many iinocent Burmese Muslims then in Kyauk Se, now in Meik Htilar he urged Government to arrrest Maulvis ( Ustads) for teaching religion from interview with modern day Neo Nazi Monk Wirathu.
He should be immediatley de- robed and arrested instead !
.မေး။ ။ သမ္မတအနေနဲ့ မနေ့က မိတ္ထီလာပဋိပက္ခနဲ့ပတ်သက်လို့ ပြောတဲ့ မိန့်ခွန်းမှာ မွန်မြတ်တဲ့ ကိုးကွယ်ယုံ ကြည်မှုကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အလွဲသုံးတဲ့ အယူသီး အစွန်းရောက်လုပ်ရပ်တွေ၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာတရားတွေကြားမှာ အမုန်းတရားတိုးပွားအောင် လုပ်ဆောင်မှုတွေကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့ ထိထိရောက် ရောက် အရေးယူမယ်လို့ ပြောထားတယ်။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆရာတော်အမြင်လေးသိချင်ပါတယ်။
ဖြေ။ ။အဲဒါအရေးယူရမယ်။ ပေါ်ပေါ်တင်တင်လုပ်တဲ့သူကို အရေးယူတာထက်၊ နောက်ကွယ်ကနေ သွေးထိုးပြီးတော့ သပ်လျှိုနေတဲ့သူတွေကို အရေးယူတာက ပိုပြီးထိရောက်တယ်။ ဥပမာအားဖြင့်- မော်လ၀ီ ဆရာတွေပေါ့။ သူတို့တွေက ကလေးလေးတွေကို စာသင်ပေးတယ်။ သူတို့တွေက သွေးခွဲစကားတွေကို ပြောပြီးတော့ သွေးခဲတာများတယ်။ ကလေးလေးတွေက ရဟန်းသံဃာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူလိုပဲ။ ဗမာတွေကို ကြည့်တဲ့ အကြည့်က တကယ့်ရန်သူကြီးတွေလို။ အဲဒီလိုဖြစ်နေတယ်။ အဲဒီတော့ သွေးခွဲတဲ့သူတွေ၊ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေကို မှိုင်းတိုက်ပြီးတော့ သွေးခွဲနေတဲ့နေတဲ့သူတွေကို အရေးယူနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ http://burma.irrawaddy.org/archives/36663
Tags: 969, Aung Thaung, Burma, Khin Shwe, Mandalay, Meiktila, Muslim, Myanmar, Thein Sein
This entry was posted on March 30, 2013 at 4:19 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
One Response to “All the Muslims and Islamic organizations in Myanmar need to demand U Thein Sein to arrest U Wira Thu together with all his gang members and investigate the 969 movement”
March 30, 2013 at 6:02 am | Reply
My Friends wrote>>ကျွန်တော့် အမြင်အရဆို ဒီ ဝီရသူ၊ ပညာဝရ တို့ကို ဖမ်းဆီးအပြစ်ပေး
ဖို့ ကိစ္စကို အဖွဲ့ကြီး က ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ရလိမ့်မယ်။အဖွဲ့ကြီး ကို
ဒီက မွတ်စလင်တွေ ဝိုင်းပြီး စာတင်တဲ့ အတွက်အဖွဲ့ကြီး က အများ
ဆန္ဒအတိုင်းလုပ်ပေးရတယ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာ
က Allah ၊ တမန်တော်မြတ် ၊ ကုရ်အာန်တို့ကို ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်
စော်ကားနေပြီဗျာ၊ မွတ်စလင်တွေ ကို ပေါ်တင်သတ်နေတာဗျာ၊
ဗလီ တွေကို လည်း ပေါ်တင် attack လုပ်နေတာဗျာ၊ ဒီအချိန်ကျ
မှ တော့ အဖွဲ့ကြီးတွေ ဆိုင်းဘုတ်ပျောက်သွားမှာလည်း စိုးရိမ်မနေ
နဲ့တော့ပေါ့ဗျာ။ ဝီရသူ တို့ ပညာဝရ တို့ ကို အစိုးရ အနေနဲ့အရေးယူ
ပေးဖို့ကို ကျွန်တော်တို့ အသံထွက်မှ ရတော့မယ်။ အဖွဲ့ကြီး က
မလုပ်ရင်လည်း မတတ်နိုင်ပါဘူး။ သို့သော် နိုင်ငံခြား က ညီနောင်
တွေ စိတ်ပျက်စရာ မလိုပါ။ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ တစ်ခု လုပ်ဖို့
ကို ကျွန်တော်တို့ ပုဂ္ဂိုလ် အချို့နဲ့ တိုင်ပင်နှီးနှော်နေပါတယ်။
အင်န်ရှာအလ္လာဟ် လုပ်ဖြစ်ဖို့ အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေတယ်။ ဒုအာ